Companieslọ ọrụ ụgbọ elu nkeonwe iji bido njem njem na Ukraine - RayHaber
HomeỤWAEurope38 UkraineCompanieslọ ọrụ ụgbọ elu nkeonwe iji bido njem njem na Ukraine
Companieslọ ọrụ ụgbọ elu nkeonwe iji bido njem njem na Ukraine
15 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 38 Ukraine, Europe, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ 0
ụlọ ọrụ ụgbọ oloko nkeonwe na Ukraine ịmalite ụgbọ elu
Dabere na Onye Ozi Na-ahụ Maka Ihe Ndị Ugbo nke Ukraine Vladislav Krikliy, gọọmentị Ukraine na-eme atụmatụ ịmalite ọrụ pilot maka ụlọ ọrụ onwe ya na ụzọ ụgbọ oloko ruo na njedebe nke 2019.
Ik Anyị nwere ebumnuche dị elu: ịme ụgbọelu ụgbọ elu na ụgbọ elu ndị pụrụ iche ka ọ na-erule njedebe nke afọ, Kr kwuru Krikliy.
Ihe oru ngo a ga - abụ onye na - anya ụgbọ elu, ọ ga - arụkwa naanị ụgbọ njem ibu ugbu a. Akabatabeghị nnabata buru ibu nke inye ndị ụlọ ọrụ nke onwe ha ụzọ ụgbọ oloko.
Irse Nke a agaghị abụ eziokwu ma ọ bụrụ na enyere mpaghara niile bara uru nnukwu ụlọ ọrụ. Agbanyeghị, traktọ pụrụ iche dị mma n'ihi na n'afọ ndị na-adịbeghị anya ụgbọ okporo ọkụ ụgbọ mmiri nke Ukraine enweghị ike iwepụta traktị zuru ezu. ”
Dabere na Krikliy, ekwubibeghị ụzọ ọ ga-esi rụọ ọrụ pụrụ iche ga-arụ ọrụ na ya. A na-atụle ọtụtụ nhọrọ.
Nanị otu ụlọ ọrụ nwere ikike ịnabata ụgbọ njem na Ukraine bụ Railways Uzozaliznytsia nke Ukraine State. Ekwuru na mgbe ụlọ ọrụ nkeonwe malitere ụgbọ njem na Ukraine, ha ga-edobe ego nke ha, mana steeti ahụ kwesịrị ịhazi usoro ndị ha ga-arụ ọrụ na ya.
Elvan: Ordu-Giresun Airport ga-amalite ndokwa ụgbọ elu na ọkara mbụ nke afọ 06 / 02 / 2015 Elvan: Ordu-Giresun Airport akpa ọkara nke ndokwa başlayacak.ulaştır na afọ, Maritime Affairs na Communications Minister Lutfi Elvan, oge mbụ na oké osimiri, ọ sịrị dịanyā na ime Ordu-Giresun Airport na-agwụ agwụ site na njedebe nke March na Turkey. Elvan, ubi ga-amalite ndokwa ụgbọ elu na ọkara mbụ nke afọ, ka o kwuru. Minista Lütfi Elvan mere uzo mbu n'ugwu nke ozo mgbe o mechara nyochaa banyere owu nke helikopta na-ebu ya. Minista Elvan Gọvanọ Irfan Balkanlıoğlu na ndị isi ndị ọzọ nabatara Agha ahụ. Mgbe ịchọta ebe echere na mpaghara ụgbọ ala na-echere ebe nchekwa ahụ na nchọpụta Elvan, mere otu nkwupụta banyere ọdụ ụgbọ elu. Maka kendileri taa
Kadikoy-Kartal metro 22 ga-amalite flights na August 08 / 08 / 2012 A na-emeghe nnukwu ego na nnukwu ego na akụkọ ihe mere eme nke Republic. Na ndekọ oge, agwụcha ụwa kasị gwupụtatụrụla ọwara aha 22 kilometa Kadikoy-Kartal Metro 17 August ga-amalite mgbe Istanbul kasị mkpa njem dị ka onye na nke oru ngo malitere-ewu ewu na 2008 Kadikoy-Kartal Metro ndekọ ọmụmụ ga-agwụ agwụ na a oge gara aga ngbasa ogwu. Ụwa kasị gwupụtatụrụla ọwara agafe ndia dị ka ndị kasị mkpa e si eme njem ọmụmụ na njedebe nke Side Anatolia ga-ga-etinye n'ime ọrụ. Nkà na ụzụ na ngwá na 22 kilomita n'ogologo Kadikoy-Kartal akara ga-ebu 1-1.5 nde njem a ụbọchị. A na-atụ anya na 2013 ga-arụ ọrụ na njedebe nke afọ X
Ogwe tram T1 ga-amalite ọrụ na September 25 / 05 / 2013 Usoro ụgbọ okporo ígwè Bursa T1 ga-amalite ụgbọ elu na Septemba Mayor nke Bursa Metropolitan Municipality Recep Altepe, ọrụ iwu ụgbọ okporo ígwè T1 abịawo na njedebe, na-egosi na njedebe nke njem ikpe ikpe June, mmeghe nke ụlọ akwụkwọ, kwuru na njem nke tram. Ejiri T Tils n’elu eriri 1 wee rụchaa ọrụ ahụ. Mayor Mayor Recep Altepe, na ntụle ya nke Atatürk Street, kwupụtara na ọrụ owuwu a na-aga ịkwụsị, ule ule trams na June, mmeghe nke ụlọ akwụkwọ kwupụtara mmalite nke njem ahụ. Onye isi obodo Altepe kwuru na Bursa agbanweela shei ya ma werekwa ihe siri ike iji wee bụrụ obodo ọgbara ọhụrụ.
Ọdụ ụgbọ ala Bursa 3 ga-amalite mbido n'ime ọnwa 14 / 08 / 2013 3 Bursa ga-amalite ụgbọ elu n'ime ọnwa: Mayor Recep Altepe mara ọkwa na Bursa Airlines (BHY), nke Bursa Metropolitan Municipality hiwere, ga-amalite flights gaa na 3 n'oge ọhụrụ. Ngalaba mpaghara mpaghara AK, Merinos Atatürk Congress Cultural Center Grand Terrace'ta ememe ememe. Deputy Prime Minister Bulent Arinc, Mayor Recep Altepe, Bursa deputies Onder Matli, Ismail Aydin, Hakan Cavusoglu, Kemal Serbetcioglu, Ismet Su, Tulin Erkal Kara, Canan Candemir Celik and Bedrettin Yildirim , 23. Ndị MPs, ndị isi obodo, ndị na-ahụ maka ndị nkịtị
Istanbul-Adapazari na-agagharị ụgbọ oloko ga-amalite njem tupu afọ ọhụrụ 02 / 08 / 2014 Ụgbọ njem Istanbul-Adapazari ga-ebute tupu afọ ọhụrụ ahụ: Minista sayensị, ọkachamara na nkà na ụzụ bụ Fikri Isik kwuru na nkwurịta okwu ogbako nke ga-amalite ụgbọ oloko ga-amalite tupu Afọ Ọhụrụ. Minista Fikri Işık nyere ozi banyere oru njem banyere Kocaeli na ogbako ogbako. Istanbul-Adapazari ga-anọgide na-arụ ọrụ maka ụgbọ okporo ígwè na-egosi ìhè, na-ekwu na otu ụbọchị 8 ga-eguzobe akara eriri obodo ga-eguzosi ike, ma ọ dịkarịa ala, ụgbọ okporo ígwè ndị na-agba ọsọ 1000 ga-arụ ọrụ tupu mmalite nke afọ ahụ, "ka o kwuru. Minista Işık kwuru na a ga-enwe obi ebere maka Northern Marmara ụgbọala a n'ọnwa a nakwa na ọ dị mma maka ụzọ Kaynarca-Ağva ga-ewu n'okporo ụzọ ụsọ Oké Osimiri Black Sea
Altınordu Inter Terity Bus Terminal Oru Oru bidoro
Ihe omumu Viaduct bidoro na Karakoyun Ngbanwe
Elvan: Ordu-Giresun Airport ga-amalite ndokwa ụgbọ elu na ọkara mbụ nke afọ
Kadikoy-Kartal metro 22 ga-amalite flights na August
Ogwe tram T1 ga-amalite ọrụ na September
Ọdụ ụgbọ ala Bursa 3 ga-amalite mbido n'ime ọnwa
Istanbul-Adapazari na-agagharị ụgbọ oloko ga-amalite njem tupu afọ ọhụrụ
Ukraine's Euro-2012 Railway, Road and Airline Infrastructure Preparations.
Slovak Railway Companies na Ankara
Bulgaria na Turkey Railway Companies Kwụsị Mmụba na Njem na Ibu Transportation Naa
Limak na-ama aka maka nkwekọrịta nke 224 nde euro na Ukraine